RW Rooble oo abuuray xasillooni siyaasadeed | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo abuuray xasillooni siyaasadeed
Hadii qaar ka mid ah Madaxda Maamulladu ka laaban jireen garoonka diyaaradaha xilligii uu Farmaajo ku faaganayay siyaasadda hadda guud ahaan hoggaamiyayaashu waxa ay u tamashla tagayaan goobaha dalxiiska ee ku yaalla Caasimadda Soomaalaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afar sano oo kala haad siyaasadeed, ka aamin bax iyo kala shaki amni uu dalku ku jiray, waxaa maanta abuurmay rajo dib loogu dhisi karo kalsoonidii luntay, waxaana middaas marada cad u babinaya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaastiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Wixii ka danbeeyay heshiiskii 17 September 2020, markii Madaxda Soomaaliya ku kala tageen Muqdisho, waxaa soo baxay cuuryaamin iyo ka cagajiidid hirgalinta wixii lagu heshiiyay, waxaana la fuliyay qorshooyin maleegan oo lagu ceyn wareejinayay heshiiskii doorashada.
Kadib heshiiskaas, Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo kooxdiisu waxa ay kordhiyeen caburinta muwaadiniinta, waxa ay banneysteen dhiigga siyaasiyiinta, gabi ahaanba waxay meesha ka saareen xuquuqda muwaadiniintu leeyihiin, waxayna duullaan ku qaadeen maamuallo nabad ah, si dalka aysan uga dhicin doorasho xilligeedii ku qabsoonta.
Nasiib-xumo, taasi waxa ay sababtay in qaar ka mid ah Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah DFS, ay si cad u sheegaan in aysan xitaa cuni karin raashinka Caasimadda Soomaaliya, cabsi ay ka qabaan in sun loogu daro awgeed, isla markaana ay ka hor yimaadeen guud ahaan Farmaajo iyo kooxdiisa oo waqtigu ka dhacay.
Shir Madaxdeedkii ka horreeyay midkii shalay soo gabagaboobay, qaar ka mid ah Madaxda Maamullada ayaa yimid Garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxayna in ka badan 30 cisho oo ay ku sugnaayeen dib ugu laabteen degaannadoodii iyaga oo aan guda u soo galin magaalada taas muujineysay halka uu gaaray kala shakiga Madaxda Soomaalida.
Nasiib-wanaag, maanta shikigaas wuxuu u muuqdaa mid albaabkiisii xirmay, waxaana geed dheer iyo mid gaabanba u koray RW Rooble, oo amaan buuxda ku helay isku soo dhawaan-shada siyaasadeed uu abuuray.
Hadii qaar ka mid ah Madaxda Maamulladu ka laaban jireen garoonka diyaaradaha xilligii uu Farmaajo ku faaganayay siyaasadda hadda guud ahaan hoggaamiyayaashu waxa ay u tamashla tagayaan goobaha dalxiiska ee Caasimadda Soomaalaya.
Maanta Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qado sharaf mahadcelin ah u sameeyay Madaxweyneyaasha Dowlad-goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ka dib markii uu guul ku soo dhamaaday shirkii Golaha Wadatashiga Qaran.
Guud ahaan Hoggaamiyayasha ayaa tagay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, waxayna farxadda maalinta Jimcaha la qaateen boqollaal dhalanyaro ah oo qudhoodu u dabaal dagayay guusha uu soo hooyay RW Rooble.